Abuu Mansuur “Shariif waa fulay is qaad qaad badan marka uu dharka ciidanka gashanayo ayuu saxaafadda u yeeraa Sheydaankii Beenta u sheegay waxba uma tarin”. | Halganka Online
Abuu Mansuur “Shariif waa fulay is qaad qaad badan marka uu dharka ciidanka gashanayo ayuu saxaafadda u yeeraa Sheydaankii Beenta u sheegay waxba uma tarin”.
Hogaamiye Sare oo katirsan Xarakada Shabaabul Muajaahidiin ayaa faah faahiyay qaabkii uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee shalay lagu jebiyay ciidanka shisheeye iyo Maleeshiyadka DKMG ah.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo maanta boqolaal qof oo shacab ah kula hadlayay Masjid ku yaal degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho ayaa shacabka Muslimka ah ugu hambalyeeyay guulihii ay shalay ka gaareen dagaalkii weynaa.
Abuu Mansuur oo shacabka Muslimiinta Khodbadiisa aad u dhegaysanayeen ayaa sheegay in dagaalkii shalay uu ahaa mid alle Subxaanahu Watacaalaa uu adoomadiisa ku tusiyay in awoodda Beni aadamku tahay wax aad kooban.
Wuxuu sheegay in Mujaahidiintu ay alle u dirsadeen Gurmad markii AMISOM,DKMG ah iyo dhinac walba oo islaam diid ah isisoo kaashaday Kaarayaashii iyo hubkii ugu casrisanaana lagusoo aaday dhulka mujaahidiinta maamulaan.
Markii Murtadiin, gaalo,Munaafiqiin iyo cadaw oo dhan isisoo bahaysteen taangiyadii gaaladana ay dhankeena usoo jihaysteen ayay mujaahidiintuna u gurmad dirsadeen alle laakin ciidankii Kufriga waxaa ka adkaaday Ciidankii alle oo guushii raacday”ayuu yiri Abuu Mansuur.
Sheekh Mukhtaar oo masjidka Dabaqaynka kula hadlayay shacabka ayaa kashifay fadeexadda shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha DKMG ah uu ku kacay taasi oo aheed in shariif Sheekh Axmed sawirro ku galay meel loo ekaysiiyay jiidda dagaalka.
Sheydaan ayaa u qurxiyay camalkooda waxay soo bixeen iyagoo isla qaad qaadaya Kibir iyo istus tus, shariif murtad wuxuu sheegay in uu tegay Jidda dagaalka isagoo wata tanigayada dagaalka, Iclaamkii gaalada ayaa baahiyay in madaxweynihii iyo ciidankii xoogga wax ay ugu yeereen jidda dagaalka joogaan, shariifkii xaalkiisa la ogaa ayaaba leh Jidda ayaan joogaa Kibirkii iyo isqaad qaadkii waxii uu ku dambeeyay waa lawada ogaa”abuu Mansuur Xafidahullaah.
Mas’uulkan katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa shariif Sheekh Axmed ku tilmaamay Fulay Beenaale ah oo daba ordaya gaalo iyo zanaadiqo.
Abuu Mansuur wuxuu si gaar ah ugu eedeeyay Dabadhilifnimo Dagaal Oogayaal kasoo jeedo magaalada Muqdisho dhankeeda bari in shacabkii ay ka dhasheen u adeegsanayaan gaalo.
gaaladii shalay xasuuqday shacabka ku dhaqan Kaaraan iyo Yaaqshiid waxaa hogaaminayay Murtadiin ay kamid ahaayeen Salaad Cali Jelle,Max’med Dheere iyo Shariif-ka Nimankaasi waxay gacmahooda ku burburinayaan guryahoodi waxay leeyihiin sifaadkii gaalada” Abuu Mansuur.
Wuxuu Fulay fashilmay uu ku tilmaamay shariif Sheekh Axmed “markii uu saxaafadda isugu yeero ayuu dareeska ciidanka gashtaa marka kalane uma yeero saxaafadda waa fulay ma isagaa goobta dagaalka tegi kara is tustus ayuu ku gaaraye waa lawada ogaa sida uu u cararay saacada kadib kurisigiisi ayaa la qarxiyay markaas ayuu tuuray koofiyadii uu watay”.
Warkan kasoo yeeray Abuu Mansuur ayaa kusoo aadaya xilli xarakada Shabaabul mujaahidiin ay shalay guul darro dhabarka u saarisay Ciidamo shisheeye ah iyo maleeshiyaad katirsan DKMG ah
« Dagaalkii shalay Muqdisho ka dhacay oo soo gabagaboobay iyo Taangiyadii Saliibiyiinta oo Goobta Dagaalka ku gubanaya. Bakhtigii AMISOM oo wadooyinka Muqdisho la soo tubay iyo Haweenka Muqdisho oo ku digtay Jabka Cadowga ka soo gaaray dagaalka (Daawo Sawirada Bakhtigooda). »